Abameli Bemfihlo Yomhlaba Wonke eNetherlands - Law & More
Ubumfihlo lilungelo eliyisisekelo futhi livumela bobabili abantu nezinkampani ukulawula idatha yazo. Ngenxa yokwanda kwemithetho nemithetho yaseYurophu kanye nezwe kanye nezilawuli eziqinile zokuhambisana nokutholwa ngabaphathi, izinkampani nezikhungo akunakuziba kakhulu umthetho wobumfihlo kulezi zinsuku. Isibonelo esaziwa kakhulu semithetho nemitheshwana cishe yonke inkampani noma isikhungo okufanele sihambisane nayo yi-General Data Protection Regulation (GDPR) eyaqala ukusebenza kulo lonke i-European Union. ENetherlands, imithetho eyengeziwe ibekwe kuMthetho Wokusetshenziswa Kwe-GDPR (UAVG). Umnyombo we-GDPR ne-UAVG ulele eqinisweni lokuthi yonke inkampani noma isikhungo esisebenza ngemininingwane yomuntu siqu kufanele siphathe le mininingwane yomuntu siqu ngokucophelela nangokusobala.
"Bengifuna ukuba nommeli ohlale engilungele, ngisho nangezimpelasonto"